छिमेक नीतिमा भारतको असफलता, ओली सरकारले भारतलाई पहिलेको जत्तिकै महत्त्व देला ?
सन् २०१८ मा भारतलाई छिमेकी मुलुकहरूबाट नयाँ चुनौती आउनसक्ने सम्भावना छ । लगभग सबै छिमेकीमा आगामी १६ महिनामा चुनाव हुने भएका छन् ।
भारतका साथ बन्दै अनि बिग्रँदै गरेको सम्बन्धका बीच केही देशमा सत्ता परिवर्तनको संकेत पनि पाइएको छ । दोक्लम विवाद सुल्झाउनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने विजय केशव गोखले आगामी विदेश सचिव बन्दैछन् । यस्तोमा छिमेकीहरूसँग भारतको सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ भनी हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा केहि दिनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना छ । उनी भारतविरोधी र चीनसमर्थक मानिन्छन् ।
पाकिस्तानमा यसै वर्षको जुन महिनामा चुनाव हुने भएको छ । पाकिस्तानसँग भारतको सम्बन्ध लगातार बिग्रिरहेको छ ।
माल्दिभ्समा सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति निर्वाचन हुने भएको छ । त्यहाँका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यमीन पनि भारतविरुद्ध बोलिरहेका छन् ।
दोक्लम विवादपछि भुटानको महत्त्व पनि भारतका लागि धेरै बढेको छ । नयाँ सरकारले भारतप्रति कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहन्छ ।
अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा पनि सन् २०१८ को अन्त्य वा सन् २०१९ को आरम्भमा चुनाव हुनसक्छ । भारतका लागि बंगलादेशको चुनाव धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनकि भारतले शेख हसिना र उनको सरकारसँग मिलेर धेरै काम गरेको छ र त्यहाँ भारी लगानी पनि गरेको छ ।
तर हसिनाले सत्ताविरोधी लहरको सामना गरिरहेकी छन् । त्यसैले त्यहाँको चुनावी परिणामले भारतसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध र क्षेत्रीय सम्बन्धमा निश्चित रूपमा असर पार्छ ।
त्यसैगरी अफगानिस्तानमा यसै वर्ष जुलाइमा संसदीय चुनाव हुँदैछ भने राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रिल २०१९ मा हुनेछ ।
सन् २०१९ को लोकसभा चुनावभन्दा पहिले श्रीलंकाबाहेक अन्य सबै छिमेकी मुलुकका राजनीतिक समीकरण बदलिएका हुनेछन् । भारतको काम दुई कारणले अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ ।
पहिलो, वर्तमानको सफलता भविष्यको असफलताजस्तो लाग्छ र यो लगातार कूटनीतिक चुनौती बनेको छ ।
अर्को, चीनले भारतका सबै छिमेकी मुलुकहरूका साथ सम्बन्ध विस्तार गरिरहेको छ ।
खासगरी नेपालसँगको सम्बन्धका विषयमा भारतबाट ‘ठूला गल्ती’ भएका छन् । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना चीनबाट खोसेका थिए तर नयाँ सरकारले चीनलाई यो परियोजना फर्काउने वाचा गरेको छ । मोदी बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिनका लागि नेपाल जान सक्छन् तर ठूलो प्रश्न यो छ ः ओली सरकारले भारतलाई पहिलेको जत्तिकै महत्त्व देला त ?
पाकिस्तानको कुरा गर्नुपर्दा भारतसँग उसको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै खराब छ । दुई देशबीच कुनै आधिकारिक कुराकानी भएको छैन । पाकिस्तानलाई चीनको समर्थन, चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर र आतंकवादको मुद्दामा पाकिस्तानको दोहोरो भूमिकाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा खराब असर पारेको छ ।
माल्दिभ्सका साथ भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै गएको छ । हालै माल्दिभ्स सरकारले भारतीय राजदूत अखिलेश मिश्रासँग भेटघाट गरेको भन्दै तीन पार्षदलाई निलम्बन गरेको थियो ।
यस घटनालाई भारत र माल्दिभ्सको कमजोर हुँदै गएको सम्बन्धका रूपमा हेरिएको छ । माल्दिभ्सले चीनसँगको सम्बन्ध पनि बढाएको छ । सबभन्दम चिन्ताको विषय त भारतसँग उसको सम्बन्धमा उसले विश्वास घटाएको छ ।
अर्कोतर्फ बंगलादेश, म्यान्मार र भुटानसँग भारतको सम्बन्ध बलियो छ । भारतले खासमा बंगलादेशमा धेरै लगानी गरेको छ । त्यहाँ ठूला कनेक्टिभिटी परियोजनाहरूमा भारतले पैसा लगाएको छ । त्यसबाहेक भारतले त्यहाँ विकास र रक्षाको क्षेत्रमा पाँच अर्ब डलर लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । रोहिंग्या संकटको समयमा पनि भारतले शेख हसिना सरकारसँगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो अडानमा परिवर्तन गरेको थियो ।
म्यान्मारसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्नका लागि भारतले रखाइन प्रान्तमा अढाइ करोड डलरको सामाजिक आर्थिक विकास योजना प्रस्ताव गरेको छ । यसमार्फत केही रोहिंग्याहरूलाई फर्काउने योजना छ ।
भुटानको कुरा गर्दा दोक्लम विवादका बेलामा उसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रह्यो तर भुटानका लागि महत्त्व राख्ने मुद्दामा भारतको ढिलासुस्ती पनि देखियो । भुटानको युवापुस्ताले भारतसँग निकटता अनुभव गर्दैन भन्ने आँकलन गरिएको छ । भुटानमा चुनाव हुन लागेको अवसरमा भारतले सम्बन्ध सुदृढीकरणमा काम गर्नुपर्नेछ ।
नवभारत टाइम्समा प्रकाशित इन्द्राणी बागचीको विश्लेषणको भावानुवाद
निर्मलाका बुवा यज्ञराज अस्पतालबाट डिस्चार्ज, थियो त मानसिक समस्या ? काठमाडौं – बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका बुवा यज्ञराज पन्त अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् । पन्तको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएपछि आज आइतवार अस्पतालले डिस्चार्ज गरेको उन...
ओली–प्रचण्ड प्रतिवेदन : कांग्रेस दिशाहीन, फोरम उदार, राजपा द्विविधामा
कांग्रेस महासमिति बैठकस्थलमा हिन्दूराष्ट्रका लागि हस्ताक्षर अभियान, ५०० भन्दा बढीको हस्ताक्षर
ओली-प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन: सरकारको बचाउ, प्रोपागाण्डाविरुद्ध प्रचार अभियान [पूर्णपाठ]